“Weligeey ma qorsheyn inaan tababare noqdo.”. Zidane – Gool FM
“Weligeey ma qorsheyn inaan tababare noqdo.”. Zidane
Byare March 15, 2017
(Madrid) 15 Mar 2017. Macallinka Real Madrid Zinedine Zidane ayaa daaha ka rogay inuusan weligii qorsheyn ama uusan hamin inuu tababare noqdo intii uu ciyaaraha ku guda jiray.
Kaddib markii uu ciyaaraha ka fariistay 2006-dii, Zidane ayaa dhowr sano nasiino ka qaatay ciyaaraha ka hor inta uusan tababare u noqon kooxda dhalinyarada Real Madrid ee Castilla dabadeedna uusan caawiye u noqon Carlo Ancelotti.
Labo sano uu xilka halkaa ka hayay kaddib waxaa loo gacan galiyay shaqada sare ee stadio Santiago Bernabeu kaddib markii la ceyriyay tababare Rafa Benitez, Champions League ayuuna ku hogaamiyay Los Blancos sanadkiisii ugu horreeyay.
“Markii aan ciyaaryahanka ahaa waxaan had iyo jeer dhihi jiray marna ma noqon doono tababare,” Zidane ayaa sidaa ku yiri wareysi uu siyay FIFA.
“Markii aan ka fariistay ciyaaraha waxaan nafteyda u huray waxyaabaha kale.
“Inkastoo aan durba garowsaday inaan u baahanahay inaan ku lug lahaado garoonka markale sidaa darteed waxaan diyaariyay inaan noqdo tababare iminkana waan ku raaxeysanayaa dhabatii.”.
“Waan niyad-jabanahay.”. Lionel Messi oo ka hadlay dagaalada daba dheeraaday ee dalka Suuriya